United oo markale u dukaameysi aadeysa horyaalka Ligue 1 ka xilli ay durba ka calaameysatay xidig aad muhiim u ah. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » United oo markale u dukaameysi aadeysa horyaalka Ligue 1 ka xilli ay durba ka calaameysatay xidig aad muhiim u ah.
United oo markale u dukaameysi aadeysa horyaalka Ligue 1 ka xilli ay durba ka calaameysatay xidig aad muhiim u ah.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 2-06-16 3:39 PM Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay markale qorsheyneyso inay soo qaadato mid ka mid ah xiddigaha ugu tayada wanaagsan horyaalka Ligue 1 ee dalka Faransiiska.
Red Devils ayaa lala xiriirinayaa 19 sanno jirka qadka dhexe Adam Ounas, majaladda Daily Mirror ayaana sheegeysa inay durba xiriir la sameysay wakiilka xiddigaan.
Ounas ayaa laga yaabaa inuu qaado jidkii Anthony Martial, kaasoo xilli ciyaareed cajiib ah kula riyaaqay Man United ka dib markii xagaagii lasoo dhaafay ay 54 milyan oo ginni uga soo iibsatay AS Monaco. Labadaan xiddig ayaana u wada dhashay dalka France.
Ounas ayaa dhaliyey shan gool, halka uu caawiyey laba gool 15 kulan oo uu kusoo bilowday, xiddiga dhallintayar ee kooxda Bordeaux ayaana ka ciyaari kara qadka dhexe ee burburiyaha si la mid ah garab weerar ah.